सूचना प्रविधिको कुरो Archives - नयाँ कुरो
अब नेपालमै टिकटकबाट यसरी कमाउनुहोस पैसा
काठमाडौं – नेपालबाट सञ्चालन भएका टिकटक एकाउन्टहरुबाट पनि अव आम्दानी हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि रिलिज नेपाल प्रालिले टिकटक एकाउन्टहरुको भेरिफिकेसनका लागि काम थालेपछि नेपाली टिकटकबाट पनि आन्दानी हुने भएको हो । टिकटकका लागि नेपालबाट आफूहरु कन्टेन्ट पार्टनर भएकाले टिकटकको एकाउन्ट भेरिफिकेसनका लागि आधिकारीक रुपमा काम गर्...
आज घरघरमा लक्ष्मीपूजा गरिँदैछ । लक्ष्मी पूजाका दिन महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । लक्ष्मी पूजाका दिन देवी लक्ष्मीको आराधनासहित पूजा गर्नाले सुख, शान्ति र ऐश्वर्य मिल्ने विश्वास गरिन्छ । लक्ष्मी पूजाको दिन केही विशेष कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु भने पर्छ । अन्यथा घर आएकी लक्ष्मीसमेत फर्किने जनविश्वास छ । ...
नयाँ कुरो समाचार ।। गत अक्टोबरमा भरेको डिभी लोटरीको नतिजा स्थगित गरिएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०२१ का लागि गत अक्टोबर २ देखि नोभेम्बर ५ सम्म डिभी खुलेको थियो । उक्त डिभी लोटरीको नतिजा मे ५ मा सार्वजनिक हुने तय भएको थियो । तर अब मे ५ मा डिभी लोटरीको नतिजा नआउने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनु...
काठमाडौं, बैशाख १० । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रिपोर्टर्स विथाउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा ६ स्थान तल झरेको हो । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा गत वर्ष १०६ औं स्थानमा रहेको नेपाल आफ्नो स्थान खस्काउँदै यस वर्षको प्रतिवेदनमा १...
लक्ष्मी गौतम ।। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न लक डाउन घोषणा भएसँगै हामी सबै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौं । यो बेला कृषि कर्ममा रहनु भएका किसान, विरामी, स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी र श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी आफु सुरक्षित रहेर आ आफ्ना दायित्व निर्वाह गरिरहेको कुरा कँहि क...
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म मानिन्थ्यो कि जसरी तापक्रम बढ्दै जान्छ, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप अन्त्य भएर जान्छ । चीनको हुवेई प्रान्त (उहान शहर) मा सुरु भएको उक्त प्रकोपको केही समय त त्यही आशामै बितेको थियो । धेरै तापक्रम हुने देशहरुले त सुरुमा देशहरुले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलने दाबी गर्दै आएका...
सहकर्मीहरुका नाममा पुर्वी पहाडका पत्रकारको खुल्ला पत्र
प्रिय सहकर्मीहरु । हामी पत्रकारहरु यतिखेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौं । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले गरेको लक डाउनका अवधिमा पनि आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गर्दै समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्नु नै छ । एकातिर हामी आफैं श्रमजीवी भएकाले काम नगरी झन हुँदै हुँदैन । यो बेला हाम्रो कार्यस्थल काम गर्ने ...
अहिले कोरोना भाइरससम्बन्धी विभित्र क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट विविध मतमतान्तर आइरहेका छन् । मैले पनि ज्योतिषीय दृष्टिकोणको आधारमा यहाँ केही कुरा भन्ने जमर्को गरेकी छु । ज्योतिषमा विश्वास गर्ने÷नगर्ने यहाँका आप्नै विचारधारा होलान् । हुन त ज्योतिषीय मतका आधारमा कुुनै रोग निर्मूल पार्ने पनि होइन, त्यसका लागि ओखतीको सेवन गर्न...
ह्याकिङ प्रकरणमा मुछिएका अलीलाई पदमुक्त गर्न दबाव
पाँचथर ।। समाचार वेबसाइट ह्याकिङ प्रकरणमा मुछिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अलीलाई तत्काल वर्खास्त गनका साथै कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘संसारमै नहुने यस्तो घटना प्रेस ...
काठमाडौं । नोवेल पुरस्कार विजेता तथा स्ट्यानफोर्ड बायोफिजिस्ट माइकल लेविटले कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) असर कम हुँदै जाने बताएका छन्। “अहिले पनि भनिएजस्तो भयावह छैन। हरेक क्षेत्रमा डर, त्रास, चिन्ताको वातावरण छ। उच्चतम अवस्थामा कोरोना भाइरसको असर पुगिसकेको छ।” लस एन्जलस टाइम्ससँगको कुराकानीमा माइकलले भनेका छन्, ‘अब यो विस्...
बन्धन सिमेन्ट अब पिपिसीमा पनि
अर्जुन पौडेल , विराटनगर ।। नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको बन्धन सिमेन्ट पिपिसीमा पनि उत्पादन हुने भएको छ । हाल सम्म बन्धन सिमेन्ट ओपिसी र पियससिमा उत्पादन हुँदै आएकोमा अब ग्राहकले पिपिसीमा पनि प्राप्त गर्ने भएका छन । पूर्वी नेपाललाई आफ्नो विशेष पकड एरिया बनाएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको नेपाल अ...
नयाँ कुरो समाचार ।। पूर्वका पत्रकाहरु भ्रामक र गलत समाचार रोक्ने अभियानमा जुटेका छन् । मिडिया एक्सनले यो अवसर जुटाएको हो । पाँचथर, इलाम र झापाका ४० जना पत्रकारलाई गलत समाचार कसरी फैलिन्छ ? त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ र यसलाइ रोक्न पत्रकारले कसरी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विषयमा २ दिन सम्म कार्यशाला सञ्चालन पश्चात...
नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक विन्टर अफर ल्याएको छ। उक्त अफर माघ २२ गतेदेखि नै लागू भई आगामी चैत ३० गतेसम्म उपयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले यसभन्दा पहिले उपलब्ध अटम अफरअन्तर्गतका सेवामा केही थप सुविधा तथा नयाँ प्याकेजसमेत उपलब्ध गराएर विन्टर अफर ल्याइएको छ। जीएसएम प्रिपेड, पोष्टपेड तथा सीड...
मिनेटमै ८ अर्ब डलर आर्जन गर्ने विश्वकै धनी को हुन ?
काठमाण्डौ ।। विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा रहेका अमेजन कम्पनीका सीईओ जेफ बेजोसले गत हप्ता अर्बौ डलर सम्पत्ति थप गरेका छन् । यस्तो चमत्कार उनले कसरी गरे भन्ने विषयमा अहिले विश्व चकित परेको छ । अमेजन कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएसँगै बेजोसले यति ठूलो रकम क्षणभरमै आम्दानी गरेका हुन् । शुक्रबार अमेजनको शेय...
मैले सम्मान प्रकट गर्ने एक जना दिदीको एक छोरा छ। हर हमेशा उहाँले निकै गर्व गर्नुहुन्छ छोरी हैन छोरा जन्माएकोमा । कहीँकतै मलाई भेट्नु भयो भने घरमा छोरीलाई एक्लै छोड्नु हुन्न है, जमाना ठीक छैन भन्दै सामाजिक परिवेशको यथार्थबोध गराइरहनु हुन्छ। सोच्छु परिस्थिति बदलिएको छ, सामाजिक असुरक्षा बढेको छ। दिन प्रतिदिन बढेका हिं...
पद्म पुराणमा सवै प्रकारका एकादशीको महत्वबारे विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यहि पद्म पुराणमा उल्लेख भए अनुसार माघ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई षटतिला एकादशी भनिन्छ । धार्मिक कार्यमा पवित्र वस्तुका रुपमा प्रयोग गरिने तिलको नाम जोडिएको यो एकादशीले पनि अन्य एकादशीहरु झैं छुट्टै महत्व बोकेको छ । षटतिला एकादशी ब...
हिन्दु संस्कारमा मानिसहरुले कुनै पनि कार्य गर्दा बिध्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर काम थालनी गर्नु भन्दा पहिले सबैले भगवान श्री गणेशको आराधना र स्मरण गर्दछन्। भगवान श्री गणेशलाई मङ्गलकारक देवताका रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। आज मङ्गलवारलाई भगवान् गणेशको दिनको रुपमा मान्ने चलन पनि छ। यिनै भगवान गणेशको जन्म तिथि चतुर्थी पर्ने ...
२५ पुस २०७६, शुक्रबार: आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत शुरु भएको छ । स्कन्द पुराणको हिमालय खण्डमा यसको महिमाबारे वर्णन गरिएको छ । आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायणपछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकाले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्व...
२०७६, २५ पुष शुक्रबार: स्वस्थानी ब्रत आजदेखि आरम्भ भएको छ । स्वस्थानी ब्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिन्छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी ब्रत र माघ स्नान गरिन्छ । पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध बस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवा...
तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ । विदेशी ठगहरुले पैसा कमाउन त्यसरी मिस्ड कल गरेका हुन् । ती विदेशी नम्बरमा कल फिर्ता गर्दा मोबाइलको धेरै ब्यालेन्स काटिन सक्छ । काटिएको रकमबाट मिस्ड कल गर्ने व्यक्ति...
यी गल्तीहरु कहिल्यै नगर्नुहोस् ओछ्यान पुगेपछि !
हरेक मानिसको चाहना हुन्छ, ओछ्यानमा पुगेपछि सजिलै निदाउन सकूँ । त्यसो त निन्द्रा हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर हामी कहिलेकाँही ओछ्यानमा पुगेपछि यस्ता गल्तीहरु गर्छौं जसले गर्दा हामीले जीवनमा धेरै समस्याहरु भोग्नुपर्छ । यसर्थ, ओछ्यानमा पुगेपछि तपाईंले यस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ- १. ...
२०७६, २२ पुष मंगलवार: विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरे जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कसैले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत राज्यविरुद्धको अपराध हुने खालको कुरा उल्लेख गरे अधिकतम जन्मकैदसम्मको सजाय हुन...
श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भनिन्छ । पौष शुक्ल पक्का अलवा श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पनि पुत्रदा एकादशी भनिन्छ । पद्म पुराण अनुसार संसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको ब्रत बस्ने गरिन्छ । सन्तानविहिन रहेका सवैले पुत्रदा एकादशीको ब्रत लिनु फलदायी हुने धार्मिक विश्वास रह...
सिखहरूको दसौं गुरु "गुरु गोबिन्द सिंह"को आज ५ जनवरीको दिन जन्म जयन्ति हो। एक महान योद्धा, कवि, भक्त र आध्यात्मिक नेता गुरु गोबिन्द सिंह, ११ नोभेम्बर १६७५ मा आफ्नो बुबा गुरु तेघबहादुरको मृत्यु पछि सिखहरूको दसौं गुरु हुनुभयो। आफ्नो जीवनभर सबैलाई प्रेम, एकता र भ्रातृत्वको सन्देश दिनुभएको गुरु गोबिन्द सिंह निक्कै शान्त...
अल्सर हुँदा दुखाई बढेर आउने, खाली पेट बस्न नसक्ने खायो कि पेट दुखिहाल्ने र कसै कसैलाई बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने समस्या बढ्दै जाँदा दिसा कालो पनि हुनसक्छ । तर, सबैमा ग्यास्ट्रिक र अल्सरका लक्षण यस्तै नहुन पनि सक्छन् । यसो भनिरहँदा पेटका हरेक समस्या ग्यास्ट्रिक र अल्सरमात्र हुँदैनन् । युवा वर्गमा पेटको एक विशेष रोग ...
तमु भन्नाले गुरुङ्ग समुदायलाई चिनाउँदछ भने ल्होसार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लाग्दछ । शाब्दिक रुपमै प्रष्ट छ, आज गुरुङ्ग समूदायको नयाँ वर्ष हो । चाईनीज ज्योतिषशास्त्र र पात्रो अनुसार बर्षमा १२ महिना हुन्छन् र हरेक महिनाहरु जनावरको आधारमा नामांकृत हुन्छन् । यि जनावरहरुमा मुसा, गोरु, गाई, खरायो, चील, पानी घोडा, सर...
ज्याेतिष विज्ञानअनुसार बारका आधारमा व्यक्तिकाे स्वभाव फरक-फरक हुन्छ । आज यहाँ बार अनुसारकाे व्यक्तिकाे स्वभावबारे बताउँनेछाै‌ं । आइतबार १. आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोच र निकै विश्वसनीय हुन्छन् ।२. अन्तर्मुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् । ३. निकै संवेदनशील र कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ...
हामी सबै प्रविधि मैत्री भएका छौ । हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्रामलगायत तथा कम्प्युटर प्रयोग लगायतमा राखेको पासवर्ड कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने जान्न आवश्यक छ । दैनिक जीवनमा इन्टरनेट तथा मोबाइलको महत्व बढ्दै जाँदा सुरक्षित पासवर्डको आवश्यता समेत बढ्दै गएको छ । विभिन्न खाले इन्टरनेट अकाउण्...
आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस नेपाल लगायत विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै
आज डिसेम्बर १८ अर्थात् आप्रवासी दिवस । नेपाल लगायत विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । सन् १९९० मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारेर हरेक बर्ष डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो...
२०७६, १ पुष मंगलवार : यो समय विवाहको हो । विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आउन थाल्छ कि खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? अर्थात दुलहीको गर्भ कहिशले बस्छ । हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशुलाई जन्मदिन चाहान्छन् । उनीहरूबीच यति महिनापछि, यति वर्षपछि मात्र सन्तान ट्राइ गर्ने भनेर योजना...